သီးနှံစျေးနှုန်းတွေ နေ့တိုင်းသိအောင် ကူညီပေးမယ့် Zay Hnone
ကျွန်တော် နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပေးချင်တာ တစ်ခုကတော့ Zay Hnone (စျေးနှုန်း) ဆိုတဲ့ သီးနှံစျေးနှုန်းတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သိနိုင်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်မယ့် Android Mobile App ဖြစ်ပါတယ်။ Develper ကတော့ MMHash က ဖြစ်ပါတယ်။ Google Play Store မှာ Zay Hnone လို့ ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Zay Hnone သုံးရင် ဘာတွေသိရမလဲ?
Zay Hnone (စျေးနှုန်း) ကို သုံးမယ်ဆိုရင် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဆီ၊ ရေငန်ငါးခြောက်၊ ရေချိုငါးခြောက်၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ သကြား၊ အာလူး၊ မန်ကျည်းသီး၊ ကြံသကာ၊ ထန်းလျှက်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ပဲအမျိုးမျီုး၊ ငြုပ် အမျိုးမျိုး၊ ဆီထွက်သီးနှံ၊ ကြက်သွန်ဖြူ စတာတွေရဲ့ စျေးနှုန်းတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ ပခုက္ကူ၊ အောင်လံ၊ ရေနံချောင်း၊ မြင်းခြံ၊ ရေစကြို စသည်ဖြင့် မြို့အလိုက် စျေးနှုန်းတွေကိုလဲ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
အဲဒီလို စျေးနှုန်းတွေကို ကြည့်လို့ ကိုယ်ရှာချင်တာ မတွေ့ဘူးလား။ အဲဒီအတွက် အလွယ်တကူ ရှာလို့ရမယ့် ပုံစံတွေလဲ ပါဝင်ပါတယ်။ စာလုံးနဲ့ ရှာမလား၊ ဒါမှမဟုတ် Date အလိုက်ကြည့်မလား။ အဲဒီအပြင် စျေးနှုန်းအသစ်တွေကို မြင်ချင်တာလား။
Developer အနေနဲ့ တောင်သူဦးကြီးတွေကို ကူညီတဲ့နေရာမှာ ထိရောက်သထက် ထိရောက်အောင် ကူညီနိုင်ဖို့ စဉ်းစားထားပုံရတဲ့ Feature တွေရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ သီးနှံအမျိုးအစားအလိုက်၊ ပြက္ခဒိန်အလိုက် ရှာနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတာပါ။ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ သီးနှံစျေးနှုန်းကို သီးသန့်ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်သလို စျေးနှုန်းအတက်အကျတွေရဲ့ အနေအထားတွေကိုလဲ နေ့စွဲအလိုက် ပြန်ရှာပြီး ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Zay Hnone ကိုသုံးပြီး တစ်ခြား ဘာတွေသိနိုင်သေးလဲ?
စျေးနှုန်းမှာ တစ်ခြားသိနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ ရာသီဥတု၊ မိုးလေဝသ ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေ သီးနှံဆိုင်ရာ သတင်းတွေ စတဲ့ အပိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းဟာလဲ တောင်သူ ဦးကြီးတွေအတွက် မရှိမဖြစ် သတင်းအချက်အလက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အသုံးဝင်တဲ့ App ကို အသုံးပြုချင်တယ်၊ ညွှန်းချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ Download ချနိုင်ပါတယ်ဗျ။ တောင်သူဦးကြီးတွေဆိုတာ ကိုယ်က မိတ်ဆက်ပေးမှ သုံးတတ်မှာဆိုတော့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့လဲ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ဗျ။
features , Zay Hnon